I-Pickering Emulsions enamandla e-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-emulsions e-Pickering aqiniswa yizinhlayiya eziqinile.
Ama-emulsions e-Pickering aqinisekisa ukuthi uhlamvu lwawo "olululwe emulsifier" nolunzinyathelo lwabo oluthuthukisiwe.
I-Ultrasonic iyithuluzi eliphelele ukudala ama-emulsions we-Pickering ngokusabalalisa kuqala izinhlayiya eziqinisayo emgodini wamanzi futhi okwesibili ukukhipha isigaba samafutha / amanzi.
Ukukhishwa kwe-Pickering Emulsions
Ama-emulsions we-Pickering aqiniswa yizinhlayiya eziqinile ezifaka izikhangiso esikhundleni se-emulsifier noma i-surfactant. Ngaleyo ndlela, i-Pickering emulsions ingacatshangwa ngokuthi "i-emulsifier-free" noma “onfactant-free” njengoba ziqiniswa yizinhlayiya eziqinile. Uma amafutha namanzi bexutshwe futhi ama-droplets amafutha amancane akhiwa futhi ahlakazeka kuwo wonke amanzi, ekugcineni amaconsi azokwenzela ukunciphisa inani lamandla ohlelweni. Kodwa-ke, uma izinhlayiya eziqinile zengezwa kule nhlanganisela, ziyobopha ebusweni besikhombimsebenzisi futhi zivimbele amaconsi ukuba angabonakali, ngaleyo ndlela kubangele ukuthi emulsion ibe namandla.
Ukwakheka ngaphandle kwe-emulsifier kuyathakazelisa ngokukhethekile ukukhiqizwa kwemikhiqizo lapho ukusetshenziswa kwama-surfactants kunemiphumela emibi, isib. Imikhiqizo yezokwelapha nezimonyo. Ngaphezu kwalokho, i-Pickering emulsions ibonisa ukuqina okuqinile uma kuqhathaniswa ne-emulsions eqiniswa yi-emulsifiers evamile. Ukumbozwa kwe-droplet yezinhlayiya eziqinile kusebenza njengesithintelo esinzima ngokumelene ne-coalescence. Lokhu kusho ukuthi ngisho nokufudumala okukhulu okukhambelanayo kungahle kuqiniswe njengoba ku-emulsions ye-Pickering. I-nanoparticles eqinile, ebizwa nge-adsorbed phakathi kwesikhombimsebenzisi se-oyela-amanzi, iyingxenye egxilile emanzini nasolwandle, ukuze i-nanoparticles eqiniseke ibe ne-hydrophilic, hydrophobic noma i-amphiphilic properties. I-particle shape kanye nosayizi wezinhlayiya ziveza ukuzinza kwe-emulsion, futhi.
I-high mechanical shear ibutho le-homogenization ye-ultrasonic inqobe amandla okuvimbela amandla phakathi kwe-interfaces yesigaba. Ngaphezu kwalokho, indodanaication iphula ama-aggregate nama-nanoparticles futhi idala i-polyulisperse emulsion.
I-Sonication isetshenziselwa kokubili izinyathelo zokulungiselela i-emulsion yokukhetha:
ukusabalalisa izinhlayiya ezifakwe izikhangiso ngaphakathi kwesigaba samanzi
ukukhipha umxube we-o / w
I-Pickering Emulsion ne-Silika
Ekuqaleni, i-hydrophilic fumed i-silica powders (efana ne-Aerosil® 200 noma i-Aerosil® 380) yahlakazeka njenge-aggregomer 100nm emanzini esebenzisa i-ultrasonic device.
Esikhathini sesinyathelo sesibili, imulsions e-stable e-w /% ene-20 wt% yamafutha no-2-10nm ubukhulu besayizi we-droplet yalungiswa ngo-sonication.
Ukuze uthole emulsions ehleliwe, e-acetate e-ethyl, i-lactate e-butyl, ne-diethyl adipate esiteshini se-aqueous 6% we-silica kwakudingeka. Ukuze i-diisobutyl igqoke okungenani u-8% we-silika kudingeka ukuba uthole emulsion eqinile.
Wonke ama-emulsions alungiselelwe aboniswe ukuthi azinzile okungenani izinyanga ezingu-6.
Ngisho noma i-silica esebenza kahle (i-SiO2) ingenye yezinhlayiyana ezisetshenziswa kakhulu, ezinye izinhlayiya ezifana neFe3O4, i-hydroxyapatite, monodisperse polystyrene i-latex izinhlayiya, cyclodextrine ne-maltodextrine, ama-nanotubes ama-halloysite, i-hematite (α-Fe2O3) i-microparticles, i-poly (methyl methacrylate) (PMMA), i-chitosan / i-gelatin-B eyinkimbinkimbi yezinhlayiyana njll. isetshenziswe ngempumelelo ukudala imimoya emisiwe ye-Pickering.
I-reactor Ultrasonic ye-emulsions
Ukufudumala kwama-Cosmetic-Cosmetic Absorption by Power Ultrasonics
I-Ultrasonic Deagglomeration yeSilica Nanoparticles
Amafutha-ngaphakathi kwamanzi (o / w) Ama-emulsions we-Pickering
I-o-in-water I-emulsion ye-Pickering ibhekisela ku-emulsion lapho ama-droplets amafutha ehlakazeka emanzini njengengxenye eqhubekayo. Lolu hlobo lwe-Pickering emulsions luvame ukuqiniswa yizinhlayiyana ze-nano ezinama-angle angaphansi kuka-90º. o / w Ukukhishwa kwamakhemikhali e-Pickering kungagcinwa isib. ngokusebenzisa i-silica fumed, Fe3O4 nano izinhlayiya. Isigaba samafutha salezo Picyering emulsions singaba nesib. I-dodecane, i-octadecenyl anhydride succinic (ODSA), i-toluene ne-butylrate butyrate emanzini, ngokulandelana.
Amanzi-in-amafutha (w / o) Ama-emulsions e-Pickering
Amanzi emanzini Ama-emulsions e-Pickering aqukethe amaconsi amanzi njengoba isigaba esiphathekayo namafutha njengesigaba esiqhubekayo. Izinhlayiyana ze-Nano ezinama-contact angaphezulu kuka-90º yizithunywa eziqinisayo kakhulu kulezi zinhlobo zama-emulsions. o / w Ukukhipha emulsions kungenziwa ukuqiniswa ngokusebenzisa ama-magnetic nano particles.
Emulsions e-Complex Pickering
Amapululsi ama-Pickering kabili noma amaningi (w / o / w noma o / w / o) yizinhlelo eziyinkimbinkimbi ze-polydisperse lapho amaconsi amancane amiswa khona ngaphakathi kwamaconsi amakhulu amakhulu aphinde amiswe esigabeni esilandelayo. Ukuze uthole ama-emulsions amaningi e-Pickering, inqubo ye-emulsification yezinyathelo ezimbili yenziwa: Ukuze u-emulsion ye-aw / o / w, isinyathelo sokuqala se-emulsification, i-emulsion w / o iqiniswa yi-nanoparticles yama-hydrophobic; kulesi sinyathelo sesibili sokukhipha emulsification, i-nanoparticles yama-hydrophilic isetshenziselwa ukusimama. Izimulsion eziningi zingakhiwa njengama-water-in-oil-in-water (w / o / w) noma amafutha-ngaphakathi-kwamanzi ngamafutha (o / w / o).
ama-w / o / w emulsions asetshenziswa njalo njengezimoto / izithwali zezinto ezahlukahlukene ezisebenzayo ze-hydrophilic nezidakamizwa (isib. amavithamini, ama-antioxidants, ama-enzyme, imigomo yokugoma, ama-hormone), akhishwa kancane kancane. Njengoba ezinye izinto ezisebenzayo nazo zihamba zisuka ngaphandle ziye esigabeni esingaphakathi se-emulsion emining, i-w / o / w emulsions isebenza kahle ekukhishweni kokukhishwa okubuyisiwe / okugcinekile kokukhishwa kwezinto ezisebenzayo.
Ukudonsa okudonsa phansi
Isenzakalo esiyingqayizivele esenzeka kwezinye izinhlelo ze-Pickering emulsion yi-bridging bridging. Ama-Colloids avela endaweni yokudonsa angakwazi ukukhangisa kwesinye isikhombimsebenzisi esibonakalayo, ahlanganise amaconsi amabili. Amabhuloho aqukethe ama-monolayers ezinhlayiya ze-colloidal futhi amaconsi ahlukaniswa kuphela nefilimu encane yesigaba esiqhubekayo.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Fied Silica: I-Hielscher ultrason homogenizer UP400S isabalalisa i-silica powder ngokushesha futhi kahle zibe zinhlayiya ezingama-nano eyodwa.
Ihlakaza i-Silisia eManzini isebenzisa i-UP400S